XOG CUSUB: oo kasoo kordheysa Sh Mukhtaar Roobow & Ciidamadii ugu badnaa oo loogu diyaariyay…? | Garqaad News Agency
XOG CUSUB: oo kasoo kordheysa Sh Mukhtaar Roobow & Ciidamadii ugu badnaa oo loogu diyaariyay…?
Hogaamiye ku-xigeenkii hore ee Al-shabaab Sheekh Mukhtaar Roobow “Abuu Mansuur” oo sheegay inuu isku dhiibay dowlada Somalia ayaa lagu wadaa inuu gaaro magaalada Baydhabo.
Mukhtaar Roobow ayaa waxaa mudada uu ku sugnaan doono magaalada Baydhabo amnigiisa sugi doona ciidamo isugu jiro Soomaali iyo Ethiopia kuwaa oo ay wehlin doonaan tirro dagaalyahaano ah oo hadda lagu sii diyaariyay magaalada Baydhabo.
Ciidamada ka qeybqaadan doona amniga Mukhtaar Roobow ayaa tirro ahaan lagu sheegay 120 kuwaa oo ay ka madaxbanaan yihiin dagaalyahaano lasii shaqeyn doono inta uu ku sugan yahay Baydhabo.Ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay ciidamada sugi doona amnigiisa ayaa la sheegay inay tahay mid looga gaashaamanaayo duulaan kaga imaada maleeshiyaadka Al-shabaab.
Dhinaca kale, dowlada Somalia ayaa dhan waliba xooga ka saareysa sida Roobow looga badbaadin lahaa xagjiriinta Somalia ee Al-shabaab, kuwaa oo ku howlan dadaal ay ku doonayaan inay ku khaarijiyaan.